China Model No: CBJ Series hydraulic scrap bale breaker orinasa sy mpamatsy | Miray Top
Modely No: CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine
asa: Ity CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine ity dia natao manokana handrava ny bales izay esorina amin'ny fiara fako na vy.
Fepetra takiana amin'ny bloc balé scrap: haben'ny baly ≤2000mm×800mm×800mm (L × W × H), hakitroky ≤2,5 taonina/m³.
CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina dia mety ho an'ny metaly fanarenana orinasa, fako vy orinasa, fandrendrehana sy ny fanariana orinasa mba hanatsarana ny kalitaon'ny vy sy ny vy famokarana mba hanome kalitao avo-tsara fiampangana famokarana fitaovana matihanina,
CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina dia fantatra ihany koa amin'ny hoe milina fanontam-pirinty block decomposition, dia taranaka vaovao matihanina fandravana bales vy, karazana fitaovana fitiliana. CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina dia afaka mamantatra ny loto ao amin'ny mpampiasa fonosana sakana, mba hiantohana ny votoatin'ny scrap vy, mba hiantohana ny kalitaon'ny sisa vy vokatra, mba hihazonana ny fahamarinan-toerana ny scrap vy tsena, CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina dia be mpampiasa amin'ny vy, fandrendrehana, vy, seranana sy ny indostria hafa.
●CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina samy hafa fepetra arahana sy ny modely, izay afaka mahafeno ny filan'ny mpanjifa isan-karazany.
●Misy isan-karazany azo ampiana araka ny takian'ny mpanjifa
●CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina tsy mila raikitra sy apetraka
●Fomba tsotra PLC, fahamarinan-toerana matanjaka, anton-javatra fiarovana avo, fisarahana tanteraka.
●CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina manana feo Low, tsy misy hovitrovitra.
●Avo automatique, vokatra avo lenta
● Nandritra ny fiasan'ny CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine, aza manamboatra, aza mikasika ny faritra mihetsika, aza manindry ny fitaovana ao anaty boaty amin'ny tananao na ny tongotrao.
CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina manome menaka ny mitambatra menaka faritra amin'ny alalan'ny hydraulic plunger paompy, ary avy eo dia mamindra izany ho any amin'ny hydraulic cylinder amin'ny alalan'ny fizarana manual valve mba hiteraka hery. Ny fanerena dia azo amboarina amin'ny isa ilaina araka ny zava-misy marina (ny fanombanana dia aseho amin'ny mari-pamantarana fanerena) .
CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina dia ahitana motera lehibe, hydraulic rafitra, manipulator, lolo beam, solika tanky, solika paompy sy maotera.
2. Replaceable claw loha lelan'ny
Ny lelan'ny vy firaka avo lenta azo soloina dia ampiasaina eo amin'ny lohan'ny claw, manatsara ny fanoherana ny akanjo sy ny fiainana serivisy amin'ny claw hook.
1.Mora kokoa ny mamongotra
CBJ andian-dahatsoratra hydraulic scrap bale breaker milina nandray ny siantifika sy ny firafitry ny fingotra, ny fihoko hoho nanapaka ao amin'ny fonosana tsara kokoa, mahatonga azy io ho mora kokoa ny hamongotra.
3. Manaova endrika mahatohitra ny lalamby mpitari-dalana
Araka ny toetra anaovan'ny lalamby mpitari-dalana sy ny ampahany hafa mifandraika amin'ny frame, ny takelaka vy vita amin'ny vy vita amin'ny tanjaka avo dia napetraka eo amin'ny frame.
MODELY Fanerena nominal (Ton) Removable bale habe（MG） Hery (KW)
Ny CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine dia manome ampahany amin'ny milina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa an'i SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sy ny sisa nandritra ny 10 taona mahery.
Ny maodely kely indrindra Ny CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine dia azo arovana tsara ao anaty container 40 HQ. Raha sambo amin'ny sambo, dia handrakotra ny poncho sy Load deck mba hiarovana ny CBJ Series hydraulic scrap bale breaker machine.
Jereo CBJ andian-dahatsoratra Hydraulic Scrap Bale Breaker milina miasa!
teo aloha: Modely No: Shinoa Manufacture Automatic Control WS Series Hydraulic Scrap Metal Container Shear Machine
Manaraka: Model No: Shinoa Manufacture Automatic Control SPJ Series milina shredder vy
milina fametahana bale hydraulika
Fitaovana Pop-Top Can Baler, Baler baoritra vita an-trano, Scrap Metal Compactor, Aluminum Foil Baler Machine, Leaf Compactor sy Baler, Y81 Hydraulic Baler,